Dhimashada weerarkii Hotel Saxafi oo sii korortay – Radio Muqdisho
Dhimashada weerarkii Hotel Saxafi oo sii korortay
Labo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii aragagixiso ee Alshabaab ku qaadeen Hotel Saxafi, ayaa dhaawacyadii soo gaaray ugu geeryooday Isbitaal Madiina, sida uu sheegay agaasimaha Isbitaal Madiina Dr Maxamed Yuusuf.
Dhaqtarku waxa uu sheegay in dhaawacyada 23 qof oo isugu jira kuwo culus iyo kuwo dhexe lagu daweynayo Isbitaalka, halka 5 qof oo dhaawacyadoodu fududaayeennna laga saaray isbitaalka markii loo sameeyay gurmadkii ay u baahnaayeen.
Agaasimaha Isbitaal Madiina Dr Maxamed Yuusuf oo war-fidiyeennada kula hadlayay gudaha isbitaalka ayaa sheegay in dhaawacyadu u badan yihiin jajab, isagoo intaas raaciyay in ay ku yar yihiin kuwa halista ah.
Kooxda argagixisada ah ee Alshabaab ayaa ku faantay weerarkan waxshinimada ah oo ay ku dhinteen dad rayid ah iyo mas’uuliyiin dowladda ka tirsanaa.
Maamulka Isbitaalka Madiina oo faah faahin ka bixiyay dhaawacyada isbitaalka la geeyay